Uyenza njani incoko kunye nawe kwi-WhatsApp kwi-Android | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Abo basebenzisa iTelegram sele besazi ukuba isicelo sisivumela ukuba sincokole nathi. Incoko yokuthumela iifoto ofuna ukuzigcina, okanye imiyalezo njengezikhumbuzi. Ngelishwa, kwi-WhatsApp asinakufumana lo msebenzi ngokwendalo. Into abasebenzisi abaninzi abayiphosayo. Kodwa zimbini iindlela zokwenza.
Ngale ndlela, kuyenzeka ukuba ube nencoko nawe usebenzisa i-WhatsApp kwi-smartphone yakho ye-Android. Lo ngumsebenzi onokubangela umdla kwabaninzi. Kuba ngale ndlela kuyenzeka ukuba usithumelele imiyalezo njengezikhumbuzo okanye ubhale iidilesi, phakathi kwabanye, kwincoko eyenzelwe thina kuphela.
Eyona nto ilunge kakhulu yile akunyanzelekanga ukuba sifake nantoni na ukufumana le nto. Ngale ndlela, sinokwenza incoko yobuqu kuWhatsApp, apho ungathumela khona imiyalezo kuwe, njengeTelegram. Kude kube ngoku, isicelo asikaze siqwalasele ukwazisa umsebenzi onje, nangona inyani kukuba iyinto eyamkelwa ngabasebenzisi abaninzi.
Okwangoku siyafumanisa iindlela ezimbini ezinokubakho malunga noku. Zombini zisebenza kakuhle kwaye azikho nzima. Ke iya kuxhomekeka kukhetho lomntu ngamnye. Ngayiphi na imeko, ngokusebenzisa olu khetho sinokuba nengxoxo yabucala, nathi ngokwethu kwisicelo semiyalezo kwi-Android.
1 Yenza iqela kwaye ucime abanye abasebenzisi
2 Sebenzisa isikhangeli
Yenza iqela kwaye ucime abanye abasebenzisi
Indlela yokuqala ekufuneka siyenzile yile ukwenza iqela kuWhatsApp, apho ke siya kuthi sawaphelisa onke amanye amalungu, kwinto esiyaziyo ukuba zikho iindlela ezininzi. Ngale ndlela, uya kuhlala njengelungu kuphela kwiqela kwaye uya kuba nakho ukusebenzisa incoko yokuthumela imiyalezo kuwe. Indlela elula, kodwa esebenzayo yokuba nayo. Ngawaphi amanyathelo ekufuneka siwalandele kule meko?
Vula i-WhatsApp kwifowuni yakho ye-Android
Cofa kwiqhosha lesenzo esidadayo
Cofa kwiQela elitsha (ukwenza ingxoxo yeqela elitsha)
Khetha umntu oza kuba kweli qela
Misela iqela (ifoto kunye negama)
Xa iqela lenziwe, susa omnye umntu kwiqela
Iqela sele lenziwe kwaye linokusetyenziswa
Thumela umyalezo kwincoko
Ngale ndlela, incoko sele isebenza kwisicelo, ke unokuyisebenzisa ngalo lonke ixesha. Ukuba ufuna ukuzithumela ifoto okanye ifayile, kuba ufuna ukuyigcina ngokukhawuleza okanye ngenxa yokuba ufuna ukuba nesikhumbuzo okanye idatha ongafuniyo ukuyilahla, uya kuba nakho ukusebenzisa le ncoko kwisicelo. Ukongeza, uya kuba nakho ukufikelela kuzo zombini kwifowuni yakho kwaye usebenzisa i-WhatsApp yeWebhu ngentuthuzelo iyonke. Ngokuqinisekileyo iyakukhupha ngaphandle kwenkathazo ngaphezulu kwesihlandlo esinye.
Inketho yesibini esinayo malunga noku, ukuba nengxoxo yabucala nawe ngokwakho kuWhatsApp, ifuna ukuba sisebenzise isikhangeli. Kule meko, yinto esinokuyenza kwikhompyuter, kodwa nakwifowuni. Zombini iindlela ezinokubakho zinokwenzeka, ngenxa yoko ayibonisi bunzima. Into esiza kuyenza kukusebenzisa iqhinga elifana kakhulu nelo siliqhelileyo kudala, xa sikufundisa ukuba thumela imiyalezo kubantu abangenabo abafowunelwa kule app.Umgaqo uyafana kulo mbandela. Iya kuba lula kakhulu kuwe.
Singazama ukufaka le dilesi kwisikhangeli: api.whatsapp.com/send?phone=0034TUNUMERO ngokufaka inombolo yakho yefowuni apho kukho lo mbhalo. Inokwenzeka loo nto Ndikuvumela ukuba uthumele umyalezo ngqo kwaye ke sele unayo le ncoko yenziwe kwisicelo. Nangona kukho amaxesha apho inika impazamo, umzekelo ayikandishiyi. Kodwa, kukho enye indlela ekhoyo ngokusebenzisa le ndlela inye, ekwalula kakhulu.
Ukuba kwenzeke kuwe njengam, UWhatsApp akayivulanga ifestile yokubhaliweyo xa sisebenzise loo ndlela. Kodwa, "singanyanzela" usetyenziso ukuba luvule ifestile yokubhaliweyo ngendlela elula kakhulu. Kule meko, i-URL ekufuneka siyisebenzise yile ilandelayo: Le ndlela isebenzele mna kwaye ndikwazile ukuthumela umyalezo kum ngaphandle kwengxaki kwisicelo. Nangona isebenza ngcono kwisikhangeli sekhompyuter, usebenzisa inguqulelo yewebhu yesicelo. Kwi-Android bendinakho, nangona okokuqala ndinike impazamo.
Ngale ndlela, ngoku kunokwenzeka ukuba nencoko yabucala kuWhatsApp, apho ungathumela khona imiyalezo kuwe. Amanyathelo awanzima kwaye ngale ndlela kunokwenzeka ukuba ubenomnye wemisebenzi yenkwenkwezi yeTelegram, ngokuthe ngqo kukhuphiswano lwayo oluphambili. Unganqikazi ukuzama, kuba ngokuqinisekileyo iya kuba luncedo kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyenza njani incoko kaWhatsApp nawe